Muxuu ku kala duwan yahay maaskaro qaliin caafimaad iyo N95 waji-bixinno?
Maaskarada qalliinka caafimaadku waxay go'doomi karaan walxaha waaweyn sida dhibcayaasha, iyo lakabka sare ee waa lakab biyo mareen ah, oo xannibi kara dareerka dareeraha. Si kastaba ha noqotee, maaskaro qalliinka ayaa si wax ku ool ah u shaandheyn karin walxaha qumman ee hawada ku jira, oo mashiinka maaskarada qalliinka laguma dabooli karo, gebi ahaanba kama horjoogsan karto inay hawadu gasho soo afjaridda maaskaroorkeeda.
Maaskarada N95 waa maaskaro ilaalin ah, oo shaandhayn kara walxaha aan saliida adag ama dareeraha leh dhexroorkiisu yahay 0.3 mitir ama ka badan. Si kastaba ha noqotee, waqti kasta oo aad xirato maaskaro N95, waa inaad tijaabisaa cidhiidhiga darada maaskarada (Fit Test) si loo hubiyo inaysan jirin baxsiga hawada. Saameyn ilaalin oo dhab ah. Sidaa darteed, waji-xidhka N95 ma ku habboon yihiin dadka timaha leh wajiyadooda iyo carruurtooda, maxaa yeelay dadkaasi ma dammaanad qaadi karaan adkaynta xidhitaanka maaskaro N95.
Intaas waxaa sii dheer, dadka qaba cudurka neef-mareenka, cudurka wadnaha, ama dadka kale ee qaba dhibaatooyinka neefsashada waa inay la tashadaan dhakhtarkooda ka hor inta aan la isticmaalin maaskaro N95, sababtoo ah waji-burooyinka N95 waxay ku sii adkeyn doonaan qofka xiran inuu neefsato.
Sidee loo doortaa maaskaro saxda ah?
Haddii jeermiga lagu kala qaado dhibicyo waaweyn (tusaale ahaan, bukaanku wuxuu ku buufiyaa dhibcaha ka soo baxa hindhisada ama ku qufaca dadka kale), waxaa aad ugu habboon in la xidho waji-dillaaca qalliinka biyuhu ka-hortagaan oo ilaalin ah.
Haddii walxaha jeermiska ama walxaha waxyeelada leh ay yar yihiin oo hawada lagu xannibi karo waqti dheer, tiro badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu gudbin karaa hawada, ka dib saameynta difaaca ee xidhashada waji-xidhka wajiga wejiga N95 ayaa fiicnaan doona. Maaskarooyinka N95 waa qaaxada CDC ee la oggol yahay, SARS iyo kuwa kale ee hawo-yar oo ilaalin kara cudurada;
Waxaan iibinaa maaskaro caafimaad iyo KN95.
Haddii aad u baahan tahay waji-xidho, xor u ah inaad la xiriirto
Telefoon: + 86-791-86372550
Waqtiga boostada: Mar-27-2020